Global Voices teny Malagasy » Allende Sy Pinochet, Fampitahàna Mampizara Ny Shiliana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Septambra 2013 13:12 GMT 1	 · Mpanoratra Elizabeth Rivera Nandika (en) i Marianna Breytman, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Amerika Latina, Shily, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zon'olombelona
Andro mafy ho an'ny Shiliana ny 11 Septambra  isan-taona– Fa tena nampiady hevitra ity faha-40 taonan'ny coup d'état (fanonganam-panjakana)  izay nampianjera an'i Salvador Allende ity. Manamarika ny fisalasalàna ny amin'ny fitantànan'i Sebastián Piñera,  ilay filoham-pirenena voalohany avy amin'ny hery ankavanana taorian'ny fiverenana amin'ny demokrasia tamin'ny taona 80 ity datim-pahatsiarovana eo anivon'ny taom-pifidianana ity. Ny fampielezan-kevitra  sy ireo fahatsiarovana tsy miova no niteraka indray ny adihevitra momba ny fitondran'i Salvador Allende  sy ny fandovàna ny jadon'i Augusto Pinochet , manasongadina fa mbola iainana mandraka ankehitriny ny fizarazaràna eo amin'ny samy Shiliana.
Amin'ny ankapobeny, dia mitovy dika amin'ny hoe fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny anaran'ilay Jeneraly, na ato anatiny izany na any ivelan'ny firenena. Na dia eo aza ireo mpomba an'i Pinochet sasany izay manameloka ireo vonoan'olona nandritra ny 17 taona nitondrany ( olona 40.018 no voahitsakitsaka zo nandritra ny fitondrana facto ary 3.065 no novonoina na tsy hita araka ny isa ôfisialy ) dia mbola manana ireo mpanara-dia azy ao amin'ny hery ankavanana ihany i Pinochet izay manao azy ho mahery fo sy mikitika indray ny fahavitàna ara-toe-karena izay nahatonga an'i Shily hanana toe-karena miroborobo.
Tahaka izao no nilazan'i Pablo, injeniera ara-barotra, izay manora-tena ho hery farany havanana izany ao amin'ny Twitter :
Aoka izay ny teniteny foana, i Allende no iray nanapaka ny demokrasia sy tsy nanaja ny rafitra. Ny Jeneraly Pinochet no nanavotra antsika tsy ho tahaka an'i Kiobà !
Izao no namalian'i Patriota Chileno, mpitana bokim-bola, ilay olona iray nitsikera an'i Pinochet:
@hectortitolopez  Isaorana i Pinochet afaka mihinana ianao, miaina, ary manao zavatra an-kalalahana fa tsy voatery hilahatra sakafo….. afaka hatramin'ny mibitsika ihany koa aza ianao
Mandritra izany fotoana izany dia milaza i JS Gumucio, mpisolovava :
Maneho ny halalin'ny hasosorako amin'i Pinochet sy ireo tafika izay nandray anjara tamin'ireny heloka ireny aho.
Amin'ny lafiny iray misy endrika manintona ahafantarana an'i Salvador Allende, izay ahitan'ny olona azy ho toy ny mpanao politika mahay, niharan'ny firaisana tsikombakomba notohanan'i Etazonia hanakanana ny sosialisma tsy hivelatra mandritra ny Ady Mangatsiaka– ary ny sasany kosa mahita azy ho toy ny mpitantana tsy mendrika.
Nanao fanamarihana momba an'i Allende i Pedro Cayuqueo, mpanao gazety sy i Angela, mpibitsika :
Ho ahy, dia Samurai farany amin'ny politika Shiliana i Allende. Ny karazany farany indrindra. Maty amim-boninahitra izy.
Ry Kamarady Allende, isaky ny mamaky sy mihaino ny kabarinao aho dia mampientana sy manetsika ahy ireny. Tena lehilahy manan-kaja azo alain-tahaka tsara, tena mahay miteny ianao !
Izao no nolazain'i Herman Bravo mpitandro filaminana taloha :
Allende, olona nampalahelo teo amin'ny tantarantsika, tsy afa-niatrika ny zava-nisy ary te-hanery hametraka ny jadon'ny mpiasa madinika
Nametra-panontaniana i José Navarro, mpitoraka bilaogy sady mpandraharaha :
Raha ohatra ka tahaka ny rehetra izay nahalala fa hisy loza ho avy i Allende, nahoana no tsy nametra-pialàna izy mba hialàna amin'izany ?
Nampahatsiahivin'i Nataly Ruiz R. fa herinandro vitsy mialoha ilay fanonganana tamin'ny 23 Aogositra 1973 dia notendren'i Allende ho Mpifehy Ambony tao amin'ny Tafika Shiliana i Pinochet :
Tena iray volana nialoha ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika no nanendren'ny tena #Allende  an'i #Pinochet  ho lohan'ny FFAA
Amin'ny lohateny nataony “Allende sy Pinochet”  [es], i Emilio Antileff, poety dia nitantara ny fifandraisana mifanohitra – sy mifameno- amin'ny tendron'ireo endrika roa eo amin'ny tantaran'i Shilia ireo ary raha alefa lavidavitra kokoa dia ny fampitahàna azy roa ireo :
No cabe duda, históricamente hablando, que Salvador Allende fue uno de los hombres más carismáticos que hayan llegado a La Moneda.[…]
El general Pinochet, con cero elegancia, tenía la claridad y celeridad en el camino a ejecutar su objetivo, que su antecesor no alcanzó jamás. Pinochet es en nuestra historia, del lado por donde lo miren, un eficaz martillo. Es decir, algo semejante a una herramienta que saca un clavo de la manera más violenta y desgarradora, para instalar otro, con precisión ingenieril. Sus clavos instalados son parte de las estructuras que sostienen al Chile de hoy, capeando crisis mundiales y catástrofes. […]
Tsy isalasalàna, raha ara-tantara, fa i Salvador Allende no iray amin'ireo lehilahy manintona indrindra tonga teo amin'ny La Moneda [Lapam-panjakana fiasan'ny Filoha Shiliana ]. […]
Na dia izany aza, ny vokatry ny fikomiana miaraka amin'ny fitenenana hoe: ” Ny kamarady (namana) Filoha” dia milaza fitantanana iray izay ahitàna ireo tsy fitontaliana sy halemen-tsaina amin'ny fitarihana mifanohitra amin'ny fanintonan'ny filohan'ny UP [Unidad Popular , ny fiaraha-mitantana amin'ny hery ankavia izay nahatonga an'i Allende ho ao anatin'ny governemanta]. Ny hamaroan'ireo nofinofy voazimbazimba sy ireo talenta teo ambany fifehezan'i Allende no tany nahavokatra ho an'ny firaisana tsikombakomba, toy ny nanafoanana ny fitantànana difotry ny foto-kevitra, nefa miaraka amin'ny fahafahana mitantana ahitam-bokatra izay tsy mifanaraka amin'ny hevitr'Atoa Allende.
Ny Jeneraly Pinochet, tsy mahay miaina, dia mazava sady haingana amin'ny fanatanterahana ny tanjony, izay tsy mba nananan'ny olona teo alohany. Eo amin'ny tantarantsika, amin'ny fomba rehetra ijerena azy dia maritoa mahavita azy i Pinochet. Izany hoe, fitaovana iray izay manala fantsika amin-kerisetra sy mahavaky fo mba hametrahana iray hafa miaraka amin'ny fitandremana fatratra omen'ny injeniera. Ireo fantsika napetrany dia isan'ireo rafitra izay iainan'i Shily amin'izao fotoana izao, andron'ny krizy sy ny zava-doza maneran-tany. […]
Ny fahalemen'i Allende no nampahatanjaka ny fidiran'i Pinochet. Tsy ampy tao amin'ilay miaramila ny antso manokan'ny sosialista. Ny fahavoazan'ny sasany no fahombiazan'ny hafa. Ny fitiavana izay nanosika “ilay mpanavotra” no nitarika ho amin'ny tahotra ka nampihetsika ny jeneraly “Augusto”.
Amin'ny fanandramana hanoritsortra io vanim-potoana io, betsaka ny fanontaniana apetraky ny maro momba ny tantara izay ezahan'ny andaniny sy ny ankilany hosoratana, tahaka an'i Omar Audicio, mpampianatra:
Ho ahy, jadona sy fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny fitondran'i Pinochet. Saingy heveriko fa ilay andaniny koa nanao izany ary mbola hanao izany.
Nanao antso ireo hafa toa an'i Matías Benfeld mba tsy hiverenan'ny zavatra tahàka izao intsony, na iza na iza mpanatanteraka :
Antenaina fa hiteny hoe : ‘ tsy hisy intsony’, na avy amin'ny ankilany na avy amin'ny andaniny, ny fanimbàna ny demokrasia sy ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ny Trano Firaketana ny Tsiahy.
Nandritra ny resadresaka tao amin'ny fandaharana Zero Tolerance ( Tsy misy fandeferana)-n'ny fahitalavitra tamin'ny Alahady 9 Septambra teo, nanao fanambarana maro sy jery todika momba izany fotoana izany i Alberto Cardemil  [es], Sekretera lefitry ny Atitany tamin'ny fitondran'i Pinochet. Nanao tsilian-tsofina momba izany i Profitador, mpibitsika sady mpandalina fiaraha-monina (sosiology) :
Ny zava-drehetra tamin'ny 1973 dia nilaza fa nandroso nankany amin'ny fitondrana jadona i Shily, araka izany dia ananvotra an'i Shily tamin'ny fametrahana fitondrana jadona isika #LógicaCardemil (Cardemil logic)
Misy ihany koa ireo mitsikera ny fiziriziriana amin'ny fampiasàna ny lasa amin'ny adihevitra politika ankehitriny. Ny filohan'ny hery ankavia taloha sady mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'izao fotoana izao Michelle Bachelet  no nambaran'i Angel Rodriguez sy Pato Cuevas amin'izany :
Tsy manan-kambara firy na tsy misy ho lazaina mihitsy i Bachelet rehefa tsy momba an'i Allende na i Pinochet no resahany.
Tsy i Bachelet na i Piñera: lahateny anakiroa mifanipaka izay samy mikendry ny hiaro toerana politika. Tsy hahavaha mihitsy ny olana ara-pitsarana izy ireo.
Na dia izany aza, ireto misy vitsivitsy izay mitaky ny hanakatonana io tantara io ary hijerena ny ho avy.
Mila mpitarika vaovao izay mitsinjo ny ho avy sy miala amin'ny lasan'i Allende sy i Pinochet isika amin'izao fotoana izao
Mbola mitohy ny adihevitra ary ny fotoana no hany hilaza hoe firy no tsy maintsy mbola hitranga mba hanasitranana ireo fery nisokatra 40 taona lasa izay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/09/22/51610/
 11 Septambra : http://en.wikipedia.org/wiki/1973_Chilean_coup_d%27%C3%A9tat
 Sebastián Piñera,: http://en.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Pi%C3%B1era
 fampielezan-kevitra : http://en.wikipedia.org/wiki/Chilean_presidential_election,_2013
 Salvador Allende: http://en.wikipedia.org/wiki/Salvador_Allende
 Augusto Pinochet: http://en.wikipedia.org/wiki/Augusto_Pinochet
 isa : http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/09/130909_chile_aniversario_golpe_argumentos_pinochetistas_jp.shtml
 September 9, 2013: https://twitter.com/SetzeriWarheart/statuses/377097078712721408
 September 10, 2013: https://twitter.com/fachorodriguez/statuses/377442867288891393
 September 10, 2013: https://twitter.com/jsgumucio/statuses/377449402048462848
 firaisana tsikombakomba notohanan'i Etazonia : http://www.cubadebate.cu/especiales/2013/09/10/el-derrocamiento-de-allende-contado-por-washington/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
 September 9, 2013: https://twitter.com/pcayuqueo/statuses/376890356589015040
 September 10, 2013: https://twitter.com/pomelito77/statuses/377430843242733569
 September 10, 2013: https://twitter.com/Hermanbravo/statuses/377419671424610305
 September 10, 2013: https://twitter.com/jocanavarro/statuses/377435919873101824
 September 9, 2013: https://twitter.com/Forastera__/statuses/376944624134529024
 “Allende sy Pinochet”: http://www.eldinamo.cl/blog/allende-y-pinochet/
 Unidad Popular: http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular
 Unidad Popular: http://en.wikipedia.org/wiki/Unidad_Popular
 September 9, 2013: https://twitter.com/Omar_Audicio/statuses/377098659868835840
 September 9, 2013: https://twitter.com/RojoBenfeld/statuses/377096873628024832
 Alberto Cardemil: http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Cardemil
 September 9, 2013: https://twitter.com/profitador/statuses/376888209038262272
 Michelle Bachelet: http://en.wikipedia.org/wiki/Michelle_Bachelet
 September 10, 2013: https://twitter.com/AngelitoxlAngel/statuses/377427776984199168
 September 9, 2013: https://twitter.com/cuevaspato/statuses/377094748902678528
 September 9, 2013: https://twitter.com/opinayvota/statuses/377095454367825920